EPL: Liverpool oo dib ugu soo laabtay kaalinta labaad ee horyaalka, kaddib guul soo laabasho ah oo ay garoonkeeda Anfield kaga gaartay kooxda Stoke City… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Liverpool oo dib ugu soo laabtay kaalinta labaad ee horyaalka, kaddib guul soo laabasho ah oo ay garoonkeeda Anfield kaga gaartay kooxda Stoke City… + SAWIRRO
(Liverpool) 27 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa guul soo laabasho 4-1 ah garoonkeeda Anfield kaga gaartay naadiga Stoke City, waxaana ay dib ugu soo laabtay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
Stoke City ayaa goolka uga naxsatay 12’daqiiqo qeybtii hore waxaana kubbad uu dadab ka soo qaaday Erik Pieters, madax ugu dhaliyey Jonathan Walters, Reds oo gurigeeda joogta ayaana lagu hoggaamiyey 1-0.
Liverpool ayaa la timid goolka barbaraha ciyaarta waxaana 35’daqiiqo u dhaliyey Adam Lallana , markii kubbad uu garab kala soo xarooday Mane uu inta Lallana ku dhufsaday mid ka mid ah difaacyada Stoke shabaqa kubbad joog hoose ku socota daanta midig ka suray, kulanka ayaana sidaas ku noqday gar isku mid ah 1-1.
Kooxda tababare Klopp ayaa ciyaarta dhanka kale u rogtay waxaana goolka ay hoggaanka ku qabatay 44’daqiiqo qeybtii hore u dhaliyey Roberto Firmino, kaddib markii uu dhaliyey kubbad caawimaad ah oo uu ka helay James Milner, taasoo labada dhinac ee birta goosha Stoke inta ku dhacday si deggan shabaqa u cuskatay, kulanka ayaana lagu kala nastay Reds oo ku hoggaaminaysay 2-1.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Liverpool ayaa duullaankeeda sii wadatay, waxaana gool aan ula kac ahayn iska dhaliyey 59’daqiiqo xiddiga Stoke City ee Giannelli Imbula Wanga, kulanka ayaana Stoke lagu hoggaamiyey 3-1.
Daniel Sturridge oo bedel ku soo galay ciyaarta laguna bedelay Divock Origi ayaa 70’daqiiqo u dhaliyey goolka afaraad kooxda Liverpool, kaddib markii uu ka faa’deystay qalad uu sameeyey Ryan Shawcross oo gaabiyey kubbad uu u waday goolhayaha kooxdiisa, Sturridge ayaana goolhayaha inta maray si wacan u dhammaystiray goolkaas, waxaana uu ahaa dhabtii gool dhaqsiyo badan, Reds ayaana ku adkaatay ugu dambayn 4-1.
Guushaas soo laabashada ah waxa ay Liverpool ku hoggaamisay inay dib ugu soo laabto booska kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, halkaasoo ay si KMG ah u fadhisay Man City oo xalay guul gaartay, Reds ayaana 18 kulan oo ay ciyaartay haysata 40-dhibcood, iyadoo lix dhibcood ka dambaysa Blues oo hoggaanka u haysa horyaalka Ingiriiska.
Xubnaha kooxda Barcelona oo doonaya in kooxdoodu ay soo qaadato Luka Modric
DEG DEG: Kooxda Swansea City oo cayrisay tababare Bob Bradley